Nezvedu - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Shenzhen Herbin Ice Systems Co, Ltd. yakawanikwa muna 2006. Yakave ichitarisa mukuvandudza echina muchina tekinoroji kunyangwe kubvira, kusanganisira flake chando muchina, chubhu chando muchina, block ice muchina uye zvichingodaro.
Tiri kuita mabasa makuru neOEM / ODM ye flake ice evaporators, flake ice machina, chubhu echando michina, block ice machini. Zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa neveko vatinoshanda navo pasirese.
Flake chando muchina michina:
Isu tinogadzira evhaputi yechando evhaputi muChina, uye tinotengesa evhaputi yechando kune mazhinji emamwe makambani echina echina echina, ayo anobatanidza Herbin evaporator neayo yavo ekutonhora zvikamu kuita turnkey flake ice machini munzvimbo dzakasiyana munyika dzakasiyana pasi rese.
Zvinopfuura makumi matanhatu kubva muzana zveChinese flake echando michina yakagadzirirwa Herbin flake ice evaporators.
Herbin flake chando evaporators yatove kushandiswa pasi rese.
Zvichakadaro, kambani yeHerbin yakatanga kushandisa Chromed sirivheri chiwanikwa kugadzira evaporator kubva muna 2009 kugadzirisa iyo flake chando evaporator's thermal conductivity. Mhando iyi yesirivha alloy chinhu chakakosha kwazvo, chakabvumidzwa neHerbin Ice Systems. Iyo nyowani nyowani yakavandudza iyo yekupisa conductivity ne40% kana ichienzaniswa nemamwe maChinese flake echando michina, uye inodzivirira malformation mushure menguva refu yekushandisa.
Tube chando muchina tekinoroji:
Herbin Ice masisitimu akatanga kudzidza ruzivo kubva kuVogt tube ice muchina kubvira 2009.
Isu takatenga imwe yakashandiswa P34AL muna Chikunguru 20th, 2009 kubva kuXiaobang Ice chirimwa (Iyo hombe chando chirimwa muShenzhen). Isu takabvarura chubhu echando michina, uye ndokuteedzera yega yega yega zvikamu, senge yekuyerera kwemvura director, yemvura level sensor mu evaporator, compressor oiri kutenderera system, smart mvura yekupa system, anogara achimanikidza mavharuvhu, anoshanda defrosting system uye zvese.
Kubva pane chiitiko cheVogt, isu takatanga kuyedza nekuvandudza yedu pombi yechando muchina muna 2010.
Isu tinova akanakisa chubhu chando muchina mugadziri muChina muna 2011.
Tekinoroji yepamusoro, mhando yepamusoro uye mutengo wakanaka zvinoita kuti kambani yeHerbin ikure nekukasira muhubhu yechando musika musika.
Block chando muchina michina:
Pamberi pa2009, isu tinotarisa pane echinyakare brine dziva block block chando muchina.
Takatanga kugadzira yakananga firiji block ice chando muchina kubvira 2010.
Iyi nyowani tekinoroji block ice ice muchina isimba rekuchengetedza, rakatsiga.
Zvichakadaro, isu tinopa akanaka echando kurongedza michina, echando makamuri, inotonhorera makamuri, emvura inotonhorera, yakachena masisitimu emvura, bhegi zvisimbiso, chando kugadzira michina, vharuvhu chillers zvichingodaro, Uye isu takanakira izvozvo.
(1) Iyo yakakosha kukosha kweHERBIN: Gadzira kukosha kwevatengi uye gadzira mabhenefiti kwenzanga!
(2) HERBIN inonamatira kune bhizinesi uzivi hwe "Hunhu hwekutanga, Mukurumbira wekutanga, Sevhisi kutanga", ichaenderera nekuvandudza nekuvandudza, kuyedza kugadzirisa kukwikwidzana kwepasi rese kwemidziyo yekugadzira chando, uye kuve nyika-kirasi inogadzira chando .
Ose muchina michina yakanyatsogadzirirwa kuti ive yakasimba kwazvo, saka vanogona kurarama zvakanaka kwazvo panguva yekusununguka kubva kufekitori yedu kuenda kunzvimbo yevatengi. Hapana pombi inotyoka, hapana kutsemuka kwenzvimbo dzekutema, hapana kusunungura zvikamu mushure mebumpy nyika dzegungwa kutumira uye nzira yekufambisa.
Ese echina michina ichapfuura 72 awa bvunzo usati waendeswa kune vatengi.
Herbin inopa garandi yemwedzi makumi maviri nemana kumachina ese echando.
Isu zvakare tine nyanzvi mushure mekutengesa sevhisi timu yekubatsira vashandisi kuisa echando michina. On-line kubvunza sevhisi ndeye mahara yekusimudza yakareba nguva.
Vanhu muHerbin Ice Systems:
(1) Herbin muvambi wekambani, uye akashandisa zita rake kupa zita kambani. Herbin ndiye maneja mukuru wekambani uye anoendesa basa hombe rekambani nezvekugadzira.
(2) Mike Li ndiye Sales Director, anoona nezvekutengeswa kwekambani kune ese maChinese nemusika wekunze. Mike ane ruzivo rwekutengesa muaizi muchina indasitiri kweanopfuura makore gumi, zvisati zvaitika akawana dhigirii reHIVVC Major muZhanjiang Ocean University.
Zhangjiang Ocean University inozivikanwa neayo HAVC Major muSouth yeChina.
Certification yeHerbin Ice michina.
Ese Herbin echando michina ine chitupa cheEC, SGS, UL ...
Herbin yechando muchina ine patent dzinopfuura makumi manomwe, senge patent yeflakisi yechizi evaporator zvinhu zvitsva, mafashama echando echina muchina, chubhu echando michina zvichingodaro.
(1) Madhipatimendi eHERBIN anosanganisira: Dhipatimendi Rezvekuvandudza, Dhipatimendi Rekutenga, Dhipatimendi Rekugadzira, Dhipatimendi Rehunhu, Dhipatimendi reBhizinesi, uye Dhipatimendi Rezvekutengesa
(2) Dhipatimendi Rekuvandudza: Inoona nezve chando muchina mhando yekuvandudza, chando tekinoroji kuvandudza, simba rekuchengetedza kugadzirisa uye zvichingodaro;
Dhipatimendi rekutenga: Kutenga kwezvinhu zvine chekuita nezvimwe zvekushongedzerwa zvechina michina, senge compressor, midziyo yekumanikidza, mavhavha ekuwedzera, condenser, zvichingodaro
Dhipatimendi Rekugadzira: Inotarisira kugadzirwa kwemachina echando nemimwe michina inoenderana.
Dhipatimendi reMhando: Tarisa mhando yemachina echando. Uye tarisa mashandisiro emagetsi emuchina wega wega.
Bhizinesi Dhipatimendi: Tengesai anokwanisa echando muchina michina kune vatengi
Pashure-rekutengesa dhipatimendi rebasa: Inotarisira kuiswa, kugadzirisa kwemachina echando akatengwa, uye nepamhepo sevhisi yezvinhu zvese zvine chekuita nemachando ekugadzira michina.
Nhanganyaya yekambani yekugadzira kugona
Nhanganyaya yemidziyo uye tekinoroji
Herbin kambani ine yayo yakatetepa diki lathes, 2 yakatwasuka matanda makuru, imwe izere otomatiki yekuchisa muchina, 15 echinyorwa michina yekumonera, 3 ndiro yekucheka & yekukomberedza muchina, imwe acid-yekuwachisa nzvimbo, imwe Nickel & chrome yakanamirwa padziva, imwe kupisa kurapwa tanera, imwe polyurethane (PU) muchina wekuzadza .........
Iwo ma lathes uye vashandi vane ruzivo vanovimbisa mafake echando evaporator neakanakisa kutenderera.
Unyanzvi hwekupisa kupisa hunovimbisa iyo flake chando evaporator haina kusarongeka mushure mekushandisa nguva yakareba. Yakakwana acid kuwacha uye nickel & chrome yakanamirwa pamhepo inobvumira evaporator kuti vashande zvakadzikama kweanopfuura makore makumi maviri.
Tine vanhu vanopfuura makumi mashanu vanoshanda zvine hunyanzvi nemidziyo yataurwa pamusoro, uye isu tinogona kuita mamwe maseti mashanu kusvika kumakumi mashanu emagetsi echando evaporator mazuva ese.
Tine mainjiniya maviri ediki emagetsi ekushandisa mashandisiro echando echina, maviri mainjiniya emagetsi makuru echando echina, mainjiniya matatu ehubhu yechina michina uye mamwe echando michina ine hunyanzvi hwepamusoro.
Pakati nepakati, vhiki rega rega, isu tinotumira mazana maviri seti ediki emagetsi ekushandisa mashandisirwo echando echina michina. 5-10 seti yemafake echando michina yakakura kupfuura 5T / zuva. 3-5 seti yetubhu echando michina yakakura kupfuura 3T / zuva.
Herbin yakavaka hukama hwakasimba nevatengesi vezvinhu, seBitzer, Frascold, Refcomp, Danfoss, Copeland, Emerson, O & F, Edeni, zvichingodaro.
Herbin chando michina iri kushandiswa zvakanyanya kutenderera pasirese.
Semuenzaniso, 95% yeMade-mu-Turkey mafake echando michina yakagadzirirwa Herbin flake ice evaporator nemakambani emuno eSogutma.
65% Yakagadzirwa-mu-China flake echando michina yakagadzirirwa wtih Herbin flake ice evaporators.
30% yetekinoroji yepamusoro machubhu echando michina muEast Asia anobva kuHerbin Ice Systems, senge Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Laos .....
Ice machubhu anodyiwa sekudya muhupenyu hwezuva nezuva munyika idzodzo.
80% yezvikepe zveChinese zvekuredza zvakagadzirwa neHerbin yemvura yegungwa flake echando michina.
Herbin ndiyo hombe yekutengesa flake ice muchina mutengesi weCarrefour, Wal-Mart, Tesco, Jiajiayue, uye imwe supamaketi yeChain. Mazai echando anoshandiswa pakutengesa hove, hove, kusangana uye zvichingodaro.
Herbin's hombe flake ice muchina uye chubhu echando michina anoshandiswa zvakanyanya neSanquan Chikafu, Shineway Boka, uye zvimwe zvinogadzirwa zvekudya.
Kambani yeHerbin ine mumiriri nemahofisi kuMiddle East, South Africa, East EU, Northern EU zvichingodaro.
1. Chigadzirwa kuratidza
Zvigadzirwa zvakapatsanurwa kuita zvigadzirwa zvazvino, zvakasarudzika zvigadzirwa uye zvakajairika zvigadzirwa.
(1) Zvazvino zvigadzirwa: Zvigadzirwa zvedu zvazvino magetsi anoponesa magetsi echando. Nekushandisa zvinhu zvitsva kuita iyo flake chando evaporators, edu flake echando michina inoshandisa chete 75KWH yemagetsi yekugadzira yega 1 toni yemazaya echando (Kubva pane 30C ambient uye 20C inlet mvura). Mamwe maChinese flake echando michina inoshandisa anokwana 105KWH emagetsi ekugadzira yega 1 toni yemazaya echando.
Isu zvakare tine mafashama erudzi rwemagetsi echando ari kutengeswa, uye ivo vanoshandisa 65KWH yemagetsi ekugadzira yega toni imwe yechando muavhareji.
(2) Zvigadzirwa zvakakosha: Tine mutengo wakakosha we5T / zuva chubhu yechina michina muna 2020. Uye isu tinogara tine iyi modhi muchitoro. Tinogona kugara tichitengesa 5T / zuva chubhu yechando muchina nemutengo wakanyanya pasirese, uye ivo varipo. Tinoda chete mazuva gumi nemana ekugadzira iyo nyowani 5T / zuva chubhu yechando muchina kubva ku0.
(3) Zvigadzirwa zvakajairika: Zvakawanda zvekutengesera echando michina zvidiki kugona, uye isu tinochengeta hombe huwandu hwemashini echando echando arimo. Ivo vakagadzikana uye vane yakareba kwazvo nguva yebasa, ivo vanotengeswa seinopisa-imbwa mazuva ese.
2. Tsananguro yakajairika yechigadzirwa
Commercial shandisa diki inokwana flake echando michina anoshandiswa zvakanyanya musupamaketi, muresitorendi, kuchengetedza chikafu chitsva.
Mahombekombe mahombe echando / chubhu echando michina inowanzo shandiswa mukugadzira chikafu kwezvirimwa. Uye chando chinowedzerwa muchikafu zvakananga panguva yekusangana.
Makuru mafake echando machini uye chubhu echando michina zvakare ari echando kutengesa bhizinesi. Miti yechando inotengesa chando chechando kuvanhu vanobata hove, kana kutengesa machubhu echando akaiswa mukofi / mabhawa / mahotera / zvitoro zvinotonhorera / zvitoro zvichingodaro.
Yedu echando michina anoshandiswa zvakanyanya kune hombe supamaketi, nyama kugadzira, Kugadzira chikafu chekudya, shiri kuuraya, dehwe indasitiri, Dhayi kemikari indasitiri, Kupisa kudzikisa muMine, Bio-chemishonga, marabhoritari, nzvimbo yekurapa, Kubata hove kwegungwa, kongiri mapurojekiti ekuvaka uye zvichingodaro .
Kunze kwazvino nyowani tekinoroji, yedu flake echando michina iri 30% yakawanda simba rekuchengetedza kupfuura mamwe maChinese mafeki echando echina. Kana mushandisi akasarudza yangu 20T / zuva flake chando muchina, iye achashandisa madhora mazana matanhatu ezviuru emagetsi bhiri mumakore makumi maviri. Kana akasarudza imwe chiChinese flake chando muchina, iye achashandisa madhora mazana matanhatu emadhora emagetsi bhiri uye iye hapana chaanowana. Iyo yakafanana ice mhando, uye yakaenzana huwandu hwemazaya echando.
Yedu chubhu echando michina inogadzirwa zvichibva paVogt's tube ice system. Ivo vane yakakwana mvura mwero kudzora mune evaporator, akangwara emvura inopa, kutenderera kwemafuta, inoshanda defrosting system, uye hapana mvura firiji inodzoka ku compressor .........
Ese aya mabasa akatsanangurwa aitwa zvakanaka uye iwe unenge uine yakanakisa chubhu echando michina kubva kuHerbin Ice Systems.
Tine echando michina ine Chinese standard, EU standard, USA standard .....
Kune echando michina ine EU neUSA standard, iwo tambo mavara anofanirwa kutevedzera CE mirau, iyo inogashira inogashirwa ine chengetedzo vharafu uye vharuvhu ine maviri magumo, ese ekumanikidza ngarava ane PED certification .........
Kuitira kuvimbisa michina 'yakareba sevhisi nguva, isu tinogara tichikurudzira vatengi kuti vatenge zvikamu zvekuparadza pamwe nemamishini. Pombi / mota / ma sensors / macontactors / relays anowanikwa nemitengo yakanaka kwazvo, zvakafanana nemari yatinobhadhara kune vatinopa.
Isu tinorongedza chando michina mumabhokisi akaenzana emapuranga, ayo akagadzirwa nemafuta emagetsi. Izvo zvinogamuchirwa kune dzese nyika kutenderera pasirese.
Machina achasungwa chaizvo mumabhokisi emapuranga, kana mumidziyo. Tichaita nekuchenjera kuita ese anodikanwa mabasa kudzivirira kukuvara kunokonzerwa nekuzunza, jolt munzira kubva kufekitori yangu kuenda kunzvimbo yevatengi.
Mafuremu esimbi akasimbiswa uye mapaipi akasungwa zvakapetwa. Mamwe makambani eChinese haana kumboisa izvi mukufunga.
Vatengi vanofanirwa kutora mifananidzo kuratidza iwo ekumanikidza ekumanikidza kekutanga mushure mekugamuchira iwo echando michina. Kana michina iine pombi kutyora, kutsemuka, gasi rinodonha matambudziko, isu tinobhadhara kurasikirwa kwavo.